Qaybta 1-Aad: Waqtiyadii Siyaasada Iyo Kubbada Cagtu Isku Qasmeen. – Gool24.Net
Qaybta 1-Aad: Waqtiyadii Siyaasada Iyo Kubbada Cagtu Isku Qasmeen.
Kubbada cagta iyo siyaasada ayaa inta badan lagu dadaalaa in ay noqdaan lama arimood oo gabi ahaanba kala madax banaan waxaana kubbada cagta dariiqeeda ku ilaaliyaha xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA oo ay ka farcamaan xidhiidho ay qaarad kastaaba gaar u leedahay.
Kala saraynta kubbada cagtu waa mid ka soo bilaabanta xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA, waxaana ku sii xiga xidhiidhada kubbada cagta ee qaaradaha kala duwan kuwaas oo ay hoos yimaadaan xidhiidhada wadan kastaaba uu kubbada cagta u samaystay.
Intaas waxaa sii dheer waxa uu dal kastaaba leeyahay maamul u gaar ah horyaalada maxaliga ah taas oo kubbada cagta ka dhigtay dawlada aduunka ugu balaadhan ee hal goob looga taliyo balse waxaa jiray waqtiyo gaar ah oo ay isku soo qasmeen siyaasada iyo kubbada cagtu.
Shabakada caalamiga ah ee Gool24 ayaa idiin soo kordhisay barnaamij gaar ah oo aanu si joogto ah idiinku soo gudbin doono dhacdooyinkii xusuusta lahaa ee soo kala maray kubbada cagta iyo siyaasada waxaana sidoo kale barnaamijkan qayb ka noqon doona qodobo xiiso badan.
Haddaba waxaanu maanta barnaamijkan ku ibo furi doonaa qaybta kowaad ee barnaamijka aanu u bixinay “Taxanaha siyaasada iyo kubbada cagta” waxaanan ku eegi doonaa kacdoonkii dalka Sudan iyo qaabkii ay kubbada cagta iskugu qasmeen.
1- Kubbada Cagta Iyo Qaskii Dalka Sudan.
Dalka Sudan waxaa sanadkii la soo dhaafay ka dhacay kacdoon dadwayne oo muddo siddeed bilood ah si joogto ah uga socday dariiqyada magaalooyinka waa wayn waxaana lagu doonayay in xilka loogu tuuro kalidii taliyihii xilka laga riday ee Omar al-Bashir oo muddo 30 sanadood ka badan dalka soo maamulayay.
Muddadii uu kacdoonka dalka Sudan socday waxaa gabi ahaanba isku qasmay siyaasada iyo kubbada cagta iyada oo kooxaha waa wayn iyo ciyaartoy caan ahi ay ka qayb qaateen qorshihii lagu ridayay madax wayne Omar al-Bashir.
Kacdoonkii Sudan ee looga soo horjeeday Omar al-Bashir waxa uu bilawday December 19,2018 kii wuxuuna socday muddo siddeed bilood ah laakiin markii la soo gaadhay April 11,2019 kii waxaa inqilaab milatari lagu tuuray madax wayne Omar al-Bashir.
Haddaba qaabkee ayay kubbada cagta iyo siyaasadii waalida ahayd ee dalka Sudan ay iskugu qasmeen?
Kooxda caanka ah ee Al Hilal Ondurmán ayaa si layaableh waxay u taageertay kacdoonkii dad wayne ee ka socday dalka Sudan waxayna January 24 garoonkooda ku soo bandhigeen arin isku qastay siyaasada iyo kubbada cagta.
Kooxda Al Hilal Ondurmán waa kooxda ugu fiican kubbada cagta dalka Sudan waxayna ka mid tahay kooxaha ugu awooda badan qaarada Afrika laakiin waxay taageerayaasha kooxdani isku qaseen kubbada cagta iyo siyaasada.
Kulan bishii January 24,2019 kii ka dhacay garoonka kooxda Al Hilal Ondurmán ee Al Hilal Stadium waxay tageerayaasha kooxdani ku heesayeen hal ku dhigyago lagu taageerayay kacdoonkii dad wayne ee dawlada looga soo horjeeday waxaana ka mid ahaa: “Dadku waxay doonayaan in ay dawladu dhacdo”.
Waxayna kooxda caanka ah ee Al Hilal noqotay koox qayb ka noqotay kacdoonkii cuslaa ee looga soo horjeeday hogaamiyihii waqtiga dheeraa ee Omar Al Bashir.
Intaas oo kaliya ma ahayn balse heerka ay gaadhay in kubbada cagtu ay ku qasanto siyaasadii guracnayd ee dalka Sudan way ka badnayd waxaana jiray xidigo magac wayn ku soo yeeshay kubbada cagta Sudan iyo qaarada Afrika oo kacdoonka qayb ka ahaa.
Halyayada reer Sudan ee kubbada cagta ku soo suntanaa ee Haytham Mustafa iyo Faisal Al Agab ayaa baraha bulshada markaas ku shaaciyay in ay waajib ku ahayd iyaga iyo dad waynaha reer Sudan in ay dariiqyada u soo baxaan si looga takhaluso Al Bashir.
Haytham Mustafa iyo Faisal Al Agab oo saamayn badan ku lahaa dadka reer Sudan ayaa sii huriyay kacdoonka kadib markii ay ku baaqeen in dariiqyada layskugu soo baxo si looga hor yimaado xukunkii kali taliska ahaa ee dalka soo maamulayay muddada 30 sanadood ka badnayd.
Xidigii hore ee reer Sudan ee Faisal Al Agab ayaa barkaas bartiisa twitterka ku soo qoray: “Waxaan dad waynaha reer Sudan ka codsanayaa in ay barri ka soo qayb galaan isku soo baxa Arab Market- midnimo ayaynu ku guulaysanaynaa”.
Waxaa dhiniciisa ololaha qaska siyaasada iyo kubbada cagta ka waday isla xidigii hore ee dalka Sudan ee Haytham Mustafa kaas oo isna bartiisa twitterka ku soo qoray: “Haddii ay markastaba dadku nolol doonayaan, waa in qadarku jawaabaa”.
Intaas oo kaliya kuma eeka saamayntii isku qaska siyaasada Sudan iyo kubbada cagta balse kooxda Al Hilal oo qayb ka ahayd Confederation Cup ayaa dib loo dhigay kulan ay marti galin lahayd kooxda reer Tunisia ee Etoile du Sahel oo kulankii lugtii hore 3-1 ku soo garaacday Al Hilal.
Kooxda Al Hilal waxay xaq u lahayd in ciida dalka Sudan ay kulankii lugta labaad kula ciyaarto Etoile du Sahel laakiin taas badalkeeda qaskii siyaasadeed ee saamaynta ku yeeshay kubbada cagtu waxa uu keenay in kooxda Al Hilal ay Etoile du Sahel kula ciyaartay garoonka Petro Sport stadium ee magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Al Hilal ayaa guuldaro kala kulantay kooxda ay Sudan ku qaabili lahayd ee Etoile du Sahel waxaana sabab wayn ka ahaa xaaladii qas ee Sudan ka jirtay oo kubbada cagta iyo nolosha oo dhan saamaysay.
Dhacdooyinka aan soo qaadanay waa qaybo ka mid ah sidii kubbada cagta iyo siyaasada dalka Sudan ay gabi ahaanba iskugu qasantay waqtigii kacdoonka waana mid ka mid ah shanta xaaladood ee aduunka ay kubbada cagta iyo siyaasadu inta ugu badan isku milmeen.
Intaas waxaan ku soo afmeeraynaa maqaalkeena kowaad ee barnaamijka cusub ee ay shabakada Gool24 sida joogtada ah idiinku soo gudbin doonto ee “Taxanaha siyaasada iyo kubbada cagta” waxaanad insha Allah naga filan doontaan barnaamijiyo badan oo xiiso leh.
Si aan u ogaan karno aragtidiina barnaamijkan waxaan idinka codsanaynaa in aad qaybta comments-ka aad fifirkiina noogu soo gudbisaan sidoo kale aad maqaalada la share-garaysaan asxaabtiina kale ee baraha bulshada. La soco qaybaha kale ee barnaaijkan insha Allah.
Haddii aad doonaysaan in aad si toos ah noola soo xidhiidhaan waxaad naga heli kartaan barta rasmiga ah ee aanu facebook ku leenahay ee: Gool24 Offical Facebook